Huawei P8 Lite, gam akporo nke na -eduga ahịa nke nkeji iri na ise gara aga. Androidsis
Nwagbara | | Noticias
Firmlọ ọrụ na -ahụ maka ndụmọdụ Kantal WorldPanel egosila ụlọ ọrụ ahụ data ya na ire ekwentị n'ime ọnwa atọ gara aga (n'etiti ọnwa August na Nọvemba). N'ịchịkọta data ndị a, ekwentị gam akporo ka bụ ndị na -ere ahịa kacha mma na Spain na n'ime ha ọ pụtara ihe karịa ihe niile Huawei P8 Lite.
Site na oke ahịa dị elu karịa 7%, ekwentị a sitere na ika ndị China abụrụla Kasị ere n'oge ikpeazụ trimester. Mgbe anyị gosipụtara nke a Huawei P8 Lite n'etiti afọ 2015 ekwuolarịrị na ịdị mma ekwesịghị ịdị na ọnụahịa, yana n'agbanyeghị na ọ bụ ekwentị etiti, ọ bụ kacha nwee ike ọ ga -egbo mkpa ọtụtụ ndị ọrụ.
Mana gafere njirimara ya, ihe na -eme ka ndị ahịa kwenye bụ ụgwọ ya, nke dị ugbu a dị ihe dị ka euro 150 ihe dị ka (euro dị n'elu, euro n'okpuru, dabere na ebe ị lere anya). Ma ọ bụ ugbu a, ndị na -azụ ahịa na -ahọrọ karịa maka ụdị ekwentị a na ụdị ọnụahịa a n'elu nnukwu smartphones na ahịa.
Naanị ị ga -elele anya na ndepụta ndị ọzọ iji kwenyesie ike na ya. N'ihi ya, n'ọnọdụ nke abụọ n'etiti ndị kacha ere ahịa bụ Samsung Galaxy J5, ekwentị nke pụtara n'afọ a 2016 yana nke nwekwara ọnụahịa "akụ na ụba" (ma ọ bụ kama, mezie). Ebe nke atọ bụ maka ụdị Huawei ọzọ, nke Ụdị Lite nke P9, nke akara ndị China na -aga n'ihu na-ebute ụzọ n'etiti etiti.
Nkwubi okwu ọzọ enwere ike ị nweta n'ọmụmụ ihe bụ ndị na -eri ihe enwebeghị okwukwe na Samsung. N'agbanyeghị nsogbu nke ika ahụ na '' ihe mgbawa '' Galaxy Note, onye ahịa Spanish na-aga n'ihu na-atụkwasị obi na ngwaahịa nke akara South Korea yana katalọgụ sara mbara nke etiti na ekwentị dị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei P8 Lite, gam akporo nke na - eduga ire ahia nke nkeji iri na ise